Momba anay | Xiamen Picvalue Corp.
We Xiamen Picvalue Corp.natsangana tamin'ny 2005 dia iray amin'ireo mpanamboatra, mpamatsy matihanina ary mpamatsy kitapo piknik, lamba firakotra / kidoro, kitapo fisakafoanana, kitapo neoprene, kitapo mangatsiaka, kitapo fialamboly, kitapo fanaterana sakafo ary kitapo kosmetika sns any amin'ny tanibe China. Ny orinasanay dia miorina ao Xiamen China, manodidina ny 40 minitra miala ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Xiamen amin'ny fiara.
Manana teknisiana sy mpiasa 300 eo ho eo hamokatra ny kitapo sy lamba firakotra ho an'ny baikon'ny mpanjifa vahiny izahay. Manana entana vaovao 200 ho an'ny safidin'ireo mpanjifa isan-taona isika. Manome serivisy OEM sy ODM izahay.
Ny vokatra dia aondrana any Eropa, Etazonia, Aostralia ary Aisa atsimo atsinanana. Mampiseho ny santionanay izahay ao amin'ny Canton Fair, Hong Kong Fair indroa isan-taona. Ny fanontanianao momba ny vokatra sy ny fitsidihana anay eo amin'ny toerany mandritra ny foara dia horaisina am-pitiavana.
Ankasitrahana izahay noho ny fanohanan'ny mpanjifa rehetra ary eto izahay miasa mafy hanome ny mpanjifa rehetra amin'ny serivisy tsara indrindra.
Izahay dia mitazona rafitra fanaraha-maso kalitao henjana miaraka amin'ireo injeniera tompon'andraikitra amin'ny fiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Araka izany, ny vokatray dia nahazo laza tsara ho an'ny kalitao avo lenta, fahaiza-manao kanto ary faharetana. Afaka manondrana ny vokatrao rehetra izahay ary mahatratra hatrany amin'ny fito tapitrisa USD ny varotra isan-taona.
Ny mpanjifanay lehibe any Amerika Avaratra: TJ-maxx, Bed Bath & Beyond, Belk, Christmas Tree Shop, talata maraina, Kroger, Ross & KOHL'S.
Mpanjifa mailaka any Eropa: Stockmanni France, TK-Maxx any UK, Joinco / Pingo doce Portugul, Sok Finland, Rofu Kinderland Germany, Tammer Finland, VOG dia manafatra an'i Austria, Spokey Poland.
Mpanjifa lehibe ho an'ny entana mangatsiaka kokoa any Moyen Orient: superstares Bin Dawood Saudi Arabia.
Mpanjifa marika lehibe amin'ny entana entana entana entana any Eropa: Wolt Finland
Ny orinasanay dia nandalo BSCI, Sedex AUDIT, Walmart Audit. Ny entanay koa dia nandalo ny fenitra EN71, Reach, CA65 ary FDA.
Kitapo mangatsiaka mangatsiaka kokoa sy efitrano fandefasana piknik
Factory mangatsiaka mangatsiaka kokoa
Kitapo famokarana kitapo mangatsiaka kokoa
Kitapo mangatsiaka mangatsiaka kokoa